IYunivesithi yaseLoyola Marymount (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
ULoyola Marymount Yunivesithi yiyunivesithi yaseRoma yaseKatolika engenzi-nzuzo ehlangene ne-Jesusit ne-Marymount izithethe. Eyasungulwa ngo-1911 njengeKholeji yaseSt. Vincent, i-LMU ihleli entabeni ejongene noMarine Del Rey kunye nePlaya Del Rey eLos Angeles, eCalifornia. Ngezikolo ezingaphezu kwama-9 000, yenye yezona zikolo ezinkulu kakhulu zamaRoma Katolika eWest Coast.
I-LMU ixhaswa yimithetho yenkolo yoMbutho kaYesu, iNqulo yeNgcwele Intliziyo kaMariya, kunye neSisters zikaSanta Joseph wase-Orange. Ummandla wamaJesuit weLMU ngowona mkhulu eCalifornia.
ULolala Marymount ungumzi wezikolo ezisixhenxe: i-Bellarmine College of Arts Liberal, iKholeji yoNxibelelwano kunye noBugcisa boBugcisa, iKholeji yoLawulo lwezeShishini, iFrank R. Seaver iKholeji yeSayensi kunye noBunjineli, iSikole seMfundo, iSikole seFilimu kunye neTevishini, kunye neLoyola Law School .
I-LMU Lions zincintisana kwiCandelo le-NCAA I- Ntshona yeNxweme yeNkomfa . Imibala yesikolo esisemthethweni iluhlaza okwesibhakabhaka kwaye ibomvu.
Ukufunda malunga nokwamkelwa kwi-LMU, khangela iprogram yeLoyola Marymount kunye neGPA, iSAT kunye ne-ACT graph ye-LMU admissions.
Ukubona kweLos Angeles ukusuka eLoyola Marymount
Jonga i-LA ukusuka kuLoyola Marymount (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Loyola Marymount ikampus ihlala i-bluff endaweni yaseWestchester yaseLos Angeles. Indawo efanelekileyo yekampu yimizuzu embalwa ngaphandle kwe-LAX, kunye neentlobo ezidumile ze-LA njengeHollywood, iVenice Beach, i-Santa Monica, i-Beverley Hills, kwaye kunjalo, i-Pacific Ocean.
IJalimu yokuTyhila kwiLoyola Marymount
IJalimu Yokubunjwa kuLoyola Marymount (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
IJadi yokuTyekwa yindawo efanelekileyo kwi-campus yokuzonwabisa kwiipanoramic Ocean Ocean. Efumaneka kufuphi ne-Sacred Heart Chapel, umyezo unemifanekiso emininzi ebonisa amanani enkolo, kuquka iShrine of Our Lady Fatima, eyachithwa ngo-1953.
I-Heart Heart Chapel eLoyola Marymount
I-Heart Heart Chapel eLoyola Marymount (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Spanish Grey Heart Heart Chapel yakhiwa ngowe-1953. Namhlanje iyona nto iyona nto iphawulekayo kwi-campus njengoko ihlala kwindawo ephezulu ye-bluff. Inendawo yokuhlala yokuhlala eyi-800. I-Regents Memorial Tower yanikezelwa yiklasi lika-1962.
IiJardken Gardens eLoyola Marymount
IiJarden Garden eLoyola Marymount (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Phakathi kweRegents Terrace ne-Sacred Heart Chapel, i-Sunken Gardens yenye yeendawo ezine ezineengcambu ezinkulu ezingagcinwanga kwi-athletics kwi-LMU campus. Nangona kunjalo, yinto enobuncwane kakhulu eyinikwe ukufutshane kwayo kwi-Sacred Heart Chapel. Akuqhelekanga ukubona abafundi bephumla kwintsimi phakathi kweeklasi, okanye ukubona imitshato ngexesha lefudumalayo.
I-St. Roberts Hall eLoyola Marymount
I-St Roberts Hall eLoyola Marymount (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Ukungqonge iJunken Gardens, ngaphesheya kwe-Xavier Hall, iSt Roberts Hall yayiyinye yeehholo zokufunda kwi-LMU campus. Egqitywe ngowe-1929, iSt Roberts Hall yaqanjwa ngokuthi nguSt. Robert Bellarmine, owayengumfundisi weLoyola Marymount. Iholide izindlu zamagumbi okufundela, iiofisi zikaMlawuli weKholeji yoLwazi kunye noBugcisa boBugcisa kunye noMlawuli weSikolo seFilimu kunye neThelevishini. Iziko leNkonzo kunye neNtsebenzo, intlangano yenkonzo yoluntu yaseLMU, ifumanekile kwisiHlomelo saseHollywood Roberts.
Regent Terrace eLoyola Marymount
I-Regents Terrace eLoyola Marymount (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Kwintliziyo ye-campus, i-Regents Terrace yenza njengendawo yokungena kwi-Alumni Mall, ekhokelela kwi-Von der Ahe Building, i-Foley Centre, i-Seaver College yeSayensi kunye nobunjineli, kunye neZakhiwo zoLwazi lwezoBonxibelelwano. Iiforam zabanye abafundi zenzeka kwiRegents Terrace ngeveki.
Isikolo seBanga labafundi eLoyola Marymount
Isiko seBanga labafundi eLoyola Marymount (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Student Centre ye-Malone, ebizwa ngokuba yi-Lorenzo M. Malone, owayengumDeli wabaFundi, yagqitywa ngo-1958. Iziko liziko eliphambili kuyo yonke imisebenzi yabafundi kwi-campus. ISebe leBomi labaFundi, iiofisi zabafundi ezidibeneyo, iZiko leNkonzo leCampus, IiNkonzo zoPhuhliso lwezeNkcubeko, iiNkonzo zoLuntu kunye neNkcubeko, kunye nokutya kwabafundi ziphakathi kwendawo. I-plaza yomfundi wangaphandle iquka iikofu encinane.
Centre Foley eLoyola Marymount
I-Foley Centre eLoyola Marymount (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Efumaneka kunye neAlumni Mall, Isakhiwo sase-Edward T. Foley sisekhaya leStub Theater, indawo ye-LMU yokusebenza, kunye neSebe leTheatre. Izakhiwo eziphakamileyo zakhiwo zenzelwe ukuzibukela ezo zeCheven Heart Chapel. I-Strub Theatre yindawo yokudlala yesikhokelo se-proscenium. Ngomthamo we-180, i-Strub Theater ibamba imveliso emibili okanye emithathu ngonyaka.
Isakhiwo seVon der Ahe eLoyola Marymount
Isakhiwo seVon der Ahe eLoyola Marymount (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Isakhiwo saseVon der Ahe bekuselayibrari yokuqala yeLMU. Namhlanje, limi njengeziko elimkelekileyo kwiyunivesithi. Isakhiwo siyindlu ye-eyunivesithi ye-Undergraduate Admissions i-ofisi, iiNkonzo zezeMali ze-Student, i-Study overseas, i-Aid Aid, kunye ne-Ofisi yoMbhalisi.
Ukuhlaziywa ngo-2009, isakhiwo sinekhaya le-bookstore kunye ne-Alumni Centre, ebambe imicimbi yokunxibelelanisa yonyaka yabafundi.
Isakhiwo soBugcisa boBugcisa eLoyola Marymount
Isakhiwo soBugcisa boBugcisa eLoyola Marymount (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Ngaphandle kweAlumni Mall, iKholeji yoLwazi kunye noBugcisa boBugcisa unikezela ngeeprogram zeedriki kumasebe alandelayo: Imbali ye-Art, i-Studies Communication, iMdaniso, iiNkqubo eziSebenzisiweyo eziManyeneyo, uLuhlu lwezeMtshato kunye neNtsapho, iTree, i-Studio zobuGcisa, kunye nezobuGcisa boLwazi.
Isakhiwo sisekhaya leLaband Art Gallery. Ukugqitywa ngowe-1984, igalari ibonisa imiboniso emithathu yonyaka ngonyaka, kubandakanywa neMiboniso yoBugcisa boLwazi lwaMaNyaka.
I-Seaver College yeSayensi kunye nobunjineli kwiLMU
I-Seaver College yeSayensi kunye nobunjineli kwiLMU (cofa umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Ikholeji yoLwazi lweNzululwazi kunye noBunjineli ikhona kwiAlumni Mall. Isikolo sinikeza iinkqubo zegraduate kunye neeprogram zemfundo ezidlulileyo kumasebe alandelayo: i-Biology, i-Chemistry kunye ne-Biochemistry, Ubunjineli boLuntu kunye neNzululwazi yendalo, Ubunjineli boMbane kunye neNzululwazi yeeKhompyutha, ezeMpilo kunye neSayensi yeNtuntu, iMathematika, ubunjineli boMbane kunye neFizikiki.
I-Seaver College isekhaya leZiko lezeMpilo kunye neSayensi yeNtsebenzo. Lebhu ithatha inxaxheba kwiimvavanyo zonyango, ukuqina kwempilo kunye nokuhlolwa komsebenzi. Isiko soMbane weResilience i-joint venture ne-Seaver College yeSayensi nezobunjineli ezithatha inxaxheba kwiphando yezinto eziphilayo kwiBolona Marsh, efumaneka phantsi kwe-LMU ye-bluff ihleli.
Burns Recreation Centre eLoyola Marymount
Burns Recreation Center eLoyola Marymount (nqakraza umfanekiso ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Ekufutshane neGersten Pavilion, iBurns Recreation Centre yenye yezinto ezitsha ezongezelelweyo kwi-Leavey campus. Indawo leyo ibonisa ukubhukuda kwe-Olimpiki, iinkundla zangaphakathi, iinkundla zenkundla ze-tennis zangaphandle, i-cardio kunye nokuphakamisa izisindo, kunye ne-lockers, imvula, kunye ne-pro-shop ebizwa ngokuthi i-Finish Line. Ukushisa kwakhona kukuya kwii-studios ezininzi, ezisetyenziswe kuwo wonke unyaka we-Pilates, Yoga, iDancing, iBot Camp, kunye nezoBugcisa.
IGersten Pavilion eLoyola Marymount
IGersten Pavilion eLoyola Marymount (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Gersten Pavilion yikhaya leqela le-Basketball yeLMU kunye ne-Volleyball. Eyakhelwe ngo-1981, le ndawo ibambelele kwiindawo ezi-4,000. I-Gersten Pavilion nayo yindawo yokuqhuba ixesha elizeleyo kwiLos Angeles Lakers. Phakathi kwe-alumni, i-Gersten Pavilion yaziwa nangokuthi "indlu kaHank," ngokuhlonipha i-LMU ibhola yebhoksi ye-basketball, uHank Gathers, owafa ngexesha lomdlalo webhokisi lomdlalo.
I-Hilton Centre yeBhizinisi kwiLMU
I-Hilton Centre yeBhizinisi kwiLMU (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Hilton Centre yezoShishini yikhaya kwiKholeji yoLawulo lwezoRhwebo. Kugqitywe ngowe-1996, isakhiwo sigama ngokuhlonishwa kukaConrad Hilton, umsunguli we-Hilton Hotel. I-CBA yasungulwa ngo-1911, kwaye nanamhlanje, likhaya labafundi abayi-5 000 be-graduate, aba-2,000 abaphumeleleyo kunye nabafundi besikolo abayi-1 000.
I-CBA inikezela ngeenkqubo eziphambili ze-Accounting, Iinkqubo zoLawulo loLwazi oluSebenzisiweyo, uPhuhliso loShishino, ezeMali, uLawulo kunye nokuThengisa. Isikolo sinika kwakhona iMasters yeSayensi kwi-Accounting kunye ne-Masters kwi-Business Administration. Isiko soBuchule kunye neShishini sitholakala ngaphakathi kwiziko le-Hilton. Iziko lijolise ekuboneleleni ngendawo yokuxoxwa kwemiba ehambelana neendleko kunye nemivuzo yokuqhuba ishishini ngokwemigaqo.
Library yaseHannon eLoyola Marymount
I-Hannon Library eLoyola Marymount (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Ukususela ngo-2009 i-Hannon Library iye yilayibrari ephambili yeLMU. Ifakwe kufuphi ne-Hilton Centre yezoBhishino, ibali elithathu lenye yezakhiwo ezitsha kwi-campus, kunye nesakhiwo sayo seyicycleic iconic.
Umgangatho wokuqala uphaya kwikamelo lokuzonwabisa kunye neefestile, idesksi yokuhambisa, kunye neeklasi ezimbini zeekhompyutha. Umgangatho wesibini nowesithathu ungumakhaya kwininzi yamathala eencwadi, kunye namagumbi okufundela amaqela, iidesksi zokufunda ezizimeleyo kunye neelabhu yeekhompyutheni. I-Von der Ahe, ephethe iiprogram kunye neemeko zethala leencwadi, ifumaneka kwisiteji sesithathu.
IHolo likaMcKay eLoyola Marymount
IHolo likaMcKay eLoyola Marymount (nqakraza umfanekiso ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
IHolo likaMcKay liyakhiwo esikhulu kunazo zonke zokuhlala kwiziko. Ekhaya ukuya kubafundi abangaphezu kwama-300, uMcKay uyindlu ehlala phantsi engaphantsi kweeklasi kunye namagumbi angatshatanga kunye aphindwe kabini. Isakhiwo sithiwa ngozuko lukaRaymunde McKay, owayengumongameli weKholeji yaseMarymount xa ejoyine iLoyola University ngo-1973.
Hannon Apartments eLoyola Marymount
Hannon Apartments eLoyola Marymount (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Ifumaneka ngasekupheleni kwe-campus, iHannon yiyona ndawo inkulu yezindlu zeLMU. Abafundi, ikakhulukazi abafundela ukufunda, bahlala emagumbini ahlala kabini kwigumbi lokulala ngamabumbi adibeneyo, kunye nesitya sokuhlambela ngasese, igumbi lokuhlala kunye nekhitshi.
UMcCarthy Hall eLoyola Marymount
UMcCarthy Hall eLoyola Marymount (nqakraza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Eyona nto ikhangeleka kuMarine Del Rey, le zakhiwo ezine zineziganeko zenye yeehholo zokuhlala. Ekhaya ukuya kuma-sophomores angaphezulu kwama-200, uMcCarthy Hall unamacandelo okufundela ama-room kunye namagumbi okuhlambela ngasese. Iholo yokuhlala liseduze neHannon iThala leeNcwadi kunye nabamelwane kwi-LMU kwiindawo zokuhlala, kuquka neeHolo ze-Leavey 4, 5 ne-6.
IWhelan Hall kunye neDesmond Hall kwiLMU
IWhelan Hall kunye neDesmond Hall kwiLMU (cofa umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
IWhelan Hall kunye neDesmond Hall ziiholo ezimbini zokuhlala zonyaka wokuqala ezibandakanya indawo yokuhlala yase-Del Rey yaseNyakatho kwinqanaba le-Northeast le campus. IWhelan yindlela yokuloba yindalo yokuqala yeminyaka yokuqala. Igumbi ngalinye linezindlu ezimbini abafundi, kwaye kukho indlu yokuhlambela emzimbeni ngamnye kumgangatho ngamnye. Phakathi kwendawo yokuhlala yiNest Bird's, i-café encinane, kunye ne-Founders Pavilion, ebonisa i-WOW Wings esityebileyo esitolo kunye ne-C-store, i-LMU elula.
Ikholeji eBurport Photo Tour Tour
I-Wake Forest University I-Photo Tour Tour
Florida Tourist Photo
Imbali emfutshane yeBuddhism enobudlova
I-Mercury Libra - iMercury Signs
I-Jameson Raid, ngoDisemba 1895
Funda indlela yokunyuka kwi-Gym yangaphakathi
I-Birdie: Yithini le Nqaku leNqaku eliPhambili elibhekise kwiGalofu
URonald Reagan kunye nokubulawa kwama-Marine ase-US eMelika eBeirut ngo-1983
Funda ngeePilphate Minerals
Iintetho zesiTaliyane zesiTyhu: I-Spendere
Umhla wokuQala uPisces Tips Tips
Igalari yeSiboniso seMifanekiso - I-Renoir Landscapes: 1865-1883
I-Jefferson kunye ne-Louisiana Purchase
Isidlo sokugqibela sikaLeonardo Da Vinci
I-Litmus Paper Inkcazo
Ama-Ocean Waves: Amandla, uMoya kunye neNxweme
Iqhekeza - Bakari
Qaphela kwakhona Ukutshala i-Maple yaseNorway kwiYard Yakho
Iziseko zeMpahla yaseRoma yakudala